Solika Solenoid Directional Valve | DF/SV Solenoid Valve
Valve grease - Valve solenoid directional menaka
Home/Valve menaka/Soso-kevitra Solenoid Valve Directional DF/SV - Fandoroana menaka, Solenoid miasa, Directional Valve DF/SV Series
Soso-kevitra Solenoid Valve Directional DF/SV - Fandoroana menaka, Solenoid miasa, Directional Valve DF/SV Series
Product: DF, SV Soso-kevitra Solenoid Directional Valve
1. 4/3 solenoid directional valve fanaraha-maso
2. Max. fanerena asa hatramin'ny 20Mpa/200bar
3. Valve solenoid mahery sy azo itokisana, miantoka ny hetsika fanodinana tsirairay.
Kaody mitovy amin'ny DF &SV:
– 34DF-L2 (SV-32)
– 23DF-L1 (SV-31)
menaka solenoid directional valve DF, SV andian-dahatsoratra dia ampiasaina ho an'ny elektrika terminal karazana centralized lubrication rafitra, nahazo ny switching tokana avy amin'ny herinaratra fanaraha-maso boaty fehezin'ny tsindry fanaraha-maso valves mba hifehy ny menaka solenoid directional DF, SV valva mba hahatratra ny roa lehibe menaka. fantsona miandraikitra ny famatsiana menaka hafa.
menaka solenoid directional valva DF, SV andian-dahatsoratra dia ampiasaina amin'ny cylindrical rafitra, ka ny valva fanokafana sy fanakatonana mafy, mba hihazonana tsindry ambony nandritra ny fotoana ela tsy misy leakage. Ny fampiasana ny solenoid mahery sy ny lohataona buffer, mahatonga ny hetsika ny mifamadika azo antoka kokoa.
Fitsipika miasa amin'ny grease Solenoid Directional Valve DF/SV Series
Vita ny famatsiana menaka, ny solenoid "a" sy ny solenoid "b" dia maty. Amin'ity toerana ity dia misy fantsona famatsian-tsolika roa lehibe misokatra amin'ny fitoeran-tsolika.
Rehefa manomboka ny paompy, ny solenoid "a" hery sy amin'ny toe-javatra magnetization, ny menaka na menaka avy amin'ny paompy Output dia nafindra avy amin'ny seranan-tsambo A ho any amin'ny sodina sodina / sodina lehibe famatsiana sodina L1, lehibe sodina L2 dia mbola misokatra ho an'ny fitahirizana menaka/solika.
Ny valva fanaraha-maso fanerena dia apetraka amin'ny faran'ny sodina famatsiana lehibe, raha ny fanerena amin'ny faran'ny sodina lehibe L1 dia mihoatra ny fanerena napetraky ny valva fanaraha-maso fanerena, manosika spool ho amin'ny toerana mety.
Rehefa mifindra ho amin'ny toerana tsara ny spool, sintony amin'ny ankavia ny rohy miaraka amin'ny lohany mifandray amin'ny ankavia, ataovy ny fetra switch LS-1 amin'ny fanjakana mifandray, mandefa famantarana ho an'ny kabinetra fanaraha-maso, mba hahafahan'ny solenoid "a" hery, ny tsy miasa ny paompy, miverina amin'ny toerana S-1.
Rehefa mamahana ny menaka / menaka amin'ny manaraka, ny solenoid "b" hery, ny menaka / menaka dia nafindra tany amin'ny sodina lehibe famatsiana L2 amin'ny seranana B, ny valva fanaraha-maso ny tsindry dia mifehy ny fitsangatsanganana amin'ny toe-javatra maty.
Kaody famandrihana amin'ny grease Solenoid Directional Valve DF/SV Series
(2) 3 = 3 Toerana mifamadika
(3) 4 = 4 lalana
(4) DF = Valve Directional Solenoid
(5) L= Max. tsindry hatramin'ny 20Mpa/200bar
(6) 2= seranana fivoahana roa
(7) * = Raha mila fanazavana fanampiny
Soso-kevitra Solenoid Directional Valve DF/SV Series Teknika Data
Misy ny tahan'ny vola Port Return Port Switch
34DF-L2 Anarana-32 20Mpa 3L / min 4 10Mpa 30 0-50 ℃ 17Kgs
23DF-L1 Anarana-31 3 10Kgs
1. Ny haavon'ny fidiran'ny menaka dia 310 hatramin'ny 385 (NLGI0 # hatramin'ny # 1).
2. Ny tsindry ao amin'ny fitahirizana solika (fanerena seranan-tsambo miverina) dia azo ampiasaina mivantana eo ambanin'ny 3Mpa. Ny tatatra ivelany dia tokony hifandray amin'ny 3MPa ~ 10MPa.
Data ara-teknika DF/SV Solenoid
Power Fivoahana Current Voltage fluctuation Humidity Loading Insulate grade
Zintin'aratra Frequency sarobidy Peak -15 ~ 10% 0 ~ 95% 100% H
Soso-kevitra Solenoid Valve Directional 23DF-L1 / SV-31 refy
Soso-kevitra Solenoid Valve Directional 34DF-L2 / SV-32 refy
[email voaaro]2021-11-17T22: 03: 14 + 00: 00